ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကုန်က သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးဟာ နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို ရက်တိုသင်တန်းအဖြစ် ဆစ်ဒနီ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ တက်ရောက် လေ့လာနေကြကြောင်း လေ့လာရေးခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း က အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် RFA မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်။
ဒေါ်စန္ဒာမင်းနဲ့အတူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ဦးဇေယျသော်တို့လည်း ဒီခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါလာပြီး သီတင်းပတ် တစ်ပတ်ကျော် ကြာမြင့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို သြစတြေးလျ လေဘာပါတီက ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။
အခုခရီးစဉ်ဟာ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်ပသင်တန်းတွေကို တရားဝင် တက်ရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ လွှတ်တော်ကို သွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်သလို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။
Posted by BURMESE CHANNEL at 06:05 No comments: Links to this post
သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်က အမေရိကန်အခြေစိုက် စီးပွားရေး သတင်းစာ Bloomberg အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေးမှ
Posted by BURMESE CHANNEL at 06:01 No comments: Links to this post
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စု အနည်းဆုံး ၅ခုလောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရုတ်တရက် လေပြင်း တိုက်ခဲ့တာကြောင့် မြစ်ထဲသွားလာနေတဲ့
Posted by BURMESE CHANNEL at 05:57 No comments: Links to this post
Posted by BURMESE CHANNEL at 05:55 No comments: Links to this post
ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို အစဉ်တစိုက် စောင့်ရှောက်နေသည်ဆိုပြီး "ကူညီပါရစေ" ဟု ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားသောမြန်မာနိုင်
ငံရဲတပ်ဖွဲ ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ကျွန်တော်နေထိုင်သော ၀န်ထမ်းအိမ်ရာတွင် သူခိုးခိုးခံရ၍
Posted by BURMESE CHANNEL at 06:20 No comments: Links to this post
အ.ထ.က (၅) ဗိုလ်တထောင်
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းပြောင်းလက်မှတ်များ
အခုရက်ပိုင်းအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားမိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ ကျောင်းပြောင်းလက်မှတ် အလျင်အမြန် ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြင်ကွင်းက အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက်
Posted by BURMESE CHANNEL at 06:14 No comments: Links to this post
ကချင်ပြည်နယ်သည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပြီ (ပေးစာ)
ကချင်ပြည်နယ်သည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပီ။ ကချင်လူမျိုးစု KIA အမာခံနယ် ရွှေဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေနံပိုက်လိုင်းဖြက်သန်းသည့်နေရာကို စစ်တပ် က တရားမျှတ၊ လေးစားစွာ ညှိနှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး ဖြေရှင်းရမည့်အစား၊ အခြေနေအကျပ်အတည်းကို လက်နက်အင်အားဖြင့် ဖန်တီး နေပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရတနာဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက်လည်း ကရင်လူမျိုးစု KNU လက်နက်ကိုင်များကို အင်အားသုံးပြီး ထိုင်းနိုင် ငံလစ်လျူရှုမှုဖြင့် မာနယ်ပလောတိုက်ပွဲ
Posted by BURMESE CHANNEL at 06:12 No comments: Links to this post
သံလျှင် ရဲ စခန်းအနီးက ကြက်ဝိုင်းကို အရေးယူပေးစေလို.
ရန်ကုန်တိုင်း၊သံလျှင်မြို့ နယ်အတွင်း ရဲတွေကခွင့်ပြုထားတဲ့တရားမ၀င် ကြက်တိုက်ပွဲ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ
ယနေ့ မေလ(၃)ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာ ဆိုင်ကယ်များ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ် ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို အစဉ်တစိုက် စောင့်ရှောက်နေသည်ဆိုပြီး "က...
အ.ထ.က (၅) ဗိုလ်တထောင် ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းပြောင်းလက်မှတ်များ အခုရက်ပိုင်းအခြေခံပညာအထက်တန်းေ ကျာင်းတွေမှာ ကျောင...
The Lady Movie HD အစ အဆုံး
သည်အမျိုးသမီး(မြန်မာစာတမ်းထိုး) . THE LADY FULL MOVIES HD Watch On Youtube
ဓါတ်ပုံ-Google Images ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စု အနည်းဆုံး ၅ခုလောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း မိုးသည်းထန...
အင်ဂွန်ဂျာဝါ မေ ၃၊ ၂၀၁၂ ကချင်ပြည်နယ်သည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပီ။ ကချင်လူမျိုးစု KIA အမာခံနယ် ရွှေဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေနံပိုက်လိုင်းဖြက်သန်းသည့်နေရာက...
နိုင်ငံတော်ထံမှ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာများ
ယနေ့ ကျင်းပလျက် ရှိနေသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် တတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကက နိုင်ငံတော်ထံမှ ပေးပို့သည် သ၀ဏ်...
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနားယူဖွယ်ရှိကြောင်း ပြည်ပသတင်းများက ရေးသားဖော်ပြနေချိန် ဒု သမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးလည်း ရ...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (FDI) များ ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး...
2012-05-03 ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကုန်က သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးဟာ ...
သြစတြေးလျရောက် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ နိုင်ငံ...
မအူပင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ၁ ဦးသေ၊ ရာနှင့်ချီ လေဘေးဒ...
WIRLD LASTED NEWS
AUDIOS AND PLAYERS (1)
အကောင်းဆုံးInstaller for Zawgyi font Zawgyi Font Download Gtalk Always Idle Download Gtalk Shell Download Gtalk Password Rec overy
( =in English) ( =in Myanmar)
(THE YANGON TIMES)
(Best watched with Mozilla Firefox)
BURMESE CHANNEL. Simple theme. Powered by Blogger.